Influencer comedy: "Hänno mumugwagwa" naKurt Krömer - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo.
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Kurume 21, 2022 | nhau, chiitiko, Vhidhiyo mitambo
Iyo fomati "Hänno munzira" inotanga mwaka wayo wekutanga - Kurt Krömer muenzi. Kutanga kwechirongwa cheYouTube kwakagamuchirwa zvakanyanya uye kwakapa vagadziri mazana ezviuru zvekudzvanya.
Iyo-yekugadzira "Hänno munzira" neWebdia's "allyance" uye inopesvedzera kushambadzira agency "Instinct 3" iri kupinda muchikamu chinotevera. Chiyereso chechikamu cheiyo YouTube fomati, umo "HandOfBlood" aka Hänno comedian uye muimbi Helge Schneider anotyaira kubva kuDuisburg kuenda kuHanover murori yesimulator, yakawana maonero anopfuura miriyoni 1,6 uye 130.000 anoda.
Iye zvino mwaka wekutanga wenhevedzano unotanga. Muenzi ane mukurumbira muchikamu chekutanga haasi mumwe kunze kwemuseki Kurt Krömer. Maximilian Knabe, aka HandOfBlood, angadai asina kufungidzira muenzi ari nani wekuvhura mwaka: "Ndiri kupisa seFrittenfett kuti 'Hänno Unterwegs' inozoenderera mberi! Hongu, zvinonakidza zvikuru naKurt - kunyangwe aive nezvinodiwa zvekufamba uye takapotsa tasvika kuScandinavia!". Mwaka wekutanga unotsigirwa nemugadziri wekesi yekudzivirira.
Iyo yekutanga chikamu cheiyo fomati inogona kuoneka pano:
Kare WWE 2K22 muyedzo: Yakasiyana, iri nani, isina kukwana
Inotevera Crowdfunding yeGamegenic's Magic deck bhokisi: Yakapfuura zvinotarisirwa
Super Mario 3D World + Bowser's Fury: Trailer inoratidza gameplay
Carcassonne 3.0: mitambo yechinyakare mune nyowani nyowani